Iindaba -Iimveliso zeMarathon yesiqhelo kunye nezixhobo
Xa kuziwa kwimizamo yokunceda kunye neminyhadala, ii-marathons zezona zikhetho ziphambili. Umdyarho weembaleki uvumela iimbaleki ukuba zibonise amandla, amandla kunye nokuzibophelela kuthando lwabo okanye umxhasi ozikhethelayo ngeemveliso zemarathon zesiko. Akukho nto ifana nosuku olunzima lokuzilolonga ukukhuthaza abantu ukuba banikele kwaye abantu abaninzi ngakumbi babandakanyeke; Nokuba kungenxa yozuko, ukuthatha inxaxheba okanye nokuba lithuba lokuphumelela emva kweenyanga okanye iminyaka yoqeqesho.
Ngeemarathons ezibambe imvakalelo enamandla kangako kubantu abaninzi, kwaye ngamakhulu amawaka abagijimi abangena kwimisitho minyaka le, akukhange kubekho xesha lingcono lokunyusa isibheno sakho esibonakalayo kwinqanaba elilandelayo. Abaququzeleli bemarathon, ukuma ngaphandle kwesihlwele kuya kusiba nzima ngokuba nzima; kodwa ngokuqinisekileyo ininzi into enokwenziwa ukwenza ukuba uphawu lwakho lubonakale kwangoko ngokuchasene nezinye izehlo ezingaphaya. Enye indlela ebalaseleyo yokuqalisa kukutyala imali kwisinxibo esimiselweyo sexesha lemarathon yasehlotyeni, ukusuka kwii-t-shirts zesiko ukuyila ukhetho lwakho lwe-hoodie.
Sikulungele ukusebenzisana nombutho weMbube Marathon, ukubonelela ngezinto ezininzi zomnyhadala ngehempe, ihempe, ipolo yehempe, iyunifomu kasompempe, imbasa, itawuli yemarathon, iikawusi, iminqwazi, indebe, ibhanti yesilicone, ibhanile, iiflegi zeklasta njl.
Malunga noMdyarho weMbube: INkosi, uMswati III wayenombono wehlabathi, umcimbi obaleke umgama omde we-The Kingdom of Eswatini. INgxowa-mali yesiBonelelo seSizwe yase-Eswatini, ngokuhlangeneyo neziganeko ezinkulu ezixhasa iStandard Bank Eswatini ziyazingca ngokwazi ukusingatha lo msitho ubalulekileyo ngeCawa yokuqala nganye ngo-Okthobha (6th ka-Okthobha 2019).
Ngaba ucinga ngokutyala imali kwii-t-shirts okanye izixhobo zakho zeMarathon? Ke yakha eyakho ingubo yinkonzo yakho. Yenza isiko lokunxiba kunye nezixhobo ezilungelelana ngokuchanekileyo negama lakho lomnyhadala, ngaphandle komzamo. Akukho sidingo seenkqubo ezintsonkothileyo, ukujika okude okanye iinkqubo ezididayo. Ukucela isicatshulwa seenkonzo zethu, qhagamshelana nathi ngoku.
Ixesha Post: Jan-20-2021